Umceli mngeni woMhla woMhlaba kunye noMceli mngeni woSuku loMdaniso kuZwelonke Ndisuka mac
I-Apple izakuphehlelela imiceli mngeni mibini kule Epreli yabasebenzisi beApple Watch abafuna ukuyigqiba. Le mingeni izimeleyo kwimiceli mngeni ekhutshwa rhoqo ngenyanga iyavuma fumana iimedali ezizodwa, izitikha zokuthumela imiyalezo kwaye kunjalo idosi elungileyo yezempilo.
Kule meko, inkampani yaseCupertino izakusungula imiceli mngeni emibini emitsha kubasebenzisi beApple Watch, enye esinayo minyaka le kwaye inxulumene ngqo Usuku lomhlaba kunye nolutsha olufika okokuqala kwaye luhambelana ngqo noMhla woMdaniso wamazwe aphesheya.
Yomibini le mingeni iya kufumaneka kungekudala (ayibonakali ngoku) kule nyanga ka-Epreli kodwa inemihla neenjongo ezahlukeneyo. Kwimeko yomceli mngeni woMhla woMhlaba, u-Apple ebeyiphinda-phinda unyaka nonyaka iminyaka embalwa kwaye bazakuyivula nge-22 ka-Epreli. Lo mngeni ubandakanya yenza naluphi na uhlobo loqeqesho kunye naluphi na usetyenziso oluhambelana nokubukela imizuzu engama-30 okanye nangaphezulu.
Komnye umceli mngeni okhoyo, kuyakufuneka ukudanisa kancinci kwaye oku Iya kuba nge-29 ka-Epreli. Kule ngxaki intsha inxulumene noMhla woMdaniso waMazwe ngaMazwe, abasebenzisi kuya kufuneka badanise imizuzu engama-20 okanye nangaphezulu ngokurekhoda uqeqesho kwi-app yokubukela. Kule meko kufuneka silusebenzise olu qeqesho kwiwotshi uqobo kwaye… Masidanise!
Into elungileyo malunga nale mingeni kukuba abasebenzisi bayakhuthazeka ukuba bahambe kwaye ngokungathandabuzekiyo sisitshixo kubo. Ayisiyongxaki yokuphumelela iwotshi (nayo) imalunga nokuphumelela kwimpilo yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Umceli mngeni woSuku loMhlaba kunye noMceli mngeni woSuku loMdaniso
UMorgan Stanley ulinciphisile ixabiso le-Apple ukuya kwi- $ 156